Guardiola oo ka hadlay xaallada dhaawaca Leroy Sane & xilliga uu dib ugu soo laabanayo garoomada – Gool FM
(Manchester) 07 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay xaalada dhaawaca xiddigiisa reer Germany ee Leroy Sané.
Pep Guardiola ayaa cadeeyay in Leroy Sané uu ku dhowyahay in markale uu dib ugu soo laabto garoomada, kaddib dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray bilawgii xilli ciyaareedkan.
Leroy Sané ayuu dhaawac dhanka Jilibka ah soo gaaray bishii August ee sanadkii hore 2019, kulankii ay kooxaha Manchester City iyo Liverpool ku wada ciyaareen finalka koobka FA Community Shield.
Laakiin waxay haatan u muuqataa in Leroy Sané uu si dhaqsi ah ugu soo laaban doono garoomada, isla markaana uu ka soo muuqan doono safka kooxda Manchester City kahor inta uusan dhamaanin xilli ciyaareedka haatan socda ee 2019/2020.
Haddaba Pep Guardiola ayaa shir Jaraa’id uu ka soo muuqday kahor kulanka caawa ee Manchester derby wuxuu kaga hadlay dhaawaca Leroy Sané wuxuuna yiri:
“Leroy Sané? Waxaan u maleynayaa inuu ku dhowyahay inuu soo laabto, wuxuu ii sheegay inuu kaligiis tababarka ku sameynayo kubadda, xaaladiisa aad ayey u fiican tahay, waliba si aan la rumeysan Karin”.
“Jilibkiisa wuxuu u muuqda mid wanaagsan, sidaa darteed uma maleynayo in waqti dheer ay qaadaneyso dib ugu soo laabashadiisa tababarka kooxda, waxaan u maleynayaa inuu soo laaban karo isbuucyada soo socda”.